Lumkela-Ukhangelo lukaGoogle oluKhangela kwiLongtail | Martech Zone
Siveze omnye umcimbi ocacileyo izolo xa sijonga ukusebenza kweinjini zethu zokukhangela eziphilayo. Ndithumele kwelinye ilizwe kwaye ndaphonononga umbono kwaye ndicofa idatha ukusuka Izixhobo zokuKhangela zikaGoogle kwaye uqaphele ukuba akukho zibalo ziphantsi, kuphela oonothi kunye nobalo olukhulu.
Ngapha koko, ukuba ubuyikholelwa kuGoogle Ii-webmasters idatha, ekuphela kwemiqathango emikhulu eqhuba ukugcwala kwabantu yayiligama lophawu kunye namagama okhuphiswano aphezulu abekwe kuwo ngumthengi. Kukho ingxaki, nangona. uphando Uhlalutyo Idatha yamagama aphambili ingqina ngokuchaseneyo .. ukuba uninzi lwendlela yokukhangela injini luvela kumagama aphambili e-longtail.
Kuya kufuneka ufunde ukuprinta okuhle ngaphakathi kwiKhonkco lokuKhangela kuGoogle Imibuzo yokukhangela isihloko sokutyhila okwenzekayo:
Iimpawu: Inani lamaphepha amaxesha asuka kwindawo yakho avele kwiziphumo zokukhangela, kunye nepesenti yokunyuka / yokwehla kwimpembelelo yemihla ngemihla ngokuthelekiswa nexesha elidlulileyo. Inani leentsuku ngalinye kwisithuba esisilelayo ukuya kuma-30, kodwa ungalitshintsha nanini na. (La manani angarhangqwa, kwaye isenokungangqinelani ngqo.)
Cofa: Inani lamaxesha umsebenzisi acofa uludwe lwendawo yakho kwiziphumo zokukhangela umbuzo othile, kunye nepesenti yokunyuka / yokwehla konqakrazo lwemihla ngemihla ngokuthelekiswa nexesha elidlulileyo. (La manani angarhangqwa, kwaye isenokungangqinelani ngqo.)
Kulungile… I-Webmasters ijikeleza ukubala okuphantsi kokuvela KUNYE nokucofa, inika kuphela ukubalwa kweyona miqulu mikhulu. Oku kuyonyusa inikezwe inyani yokuba amagama aphambili kwi-longtail anokuqhuba ezona mpawu zibalulekileyo kunye nokucofa! Ngapha koko, kuhlalutyo esilwenzileyo kunyaka ophelileyo kule bhlog, uninzi lwazo zonke izithuthi zethu eziphilayo zazivela kwi-longtail.
Ke, njengakwizinto ezininzi zokukhangela eziphilayo, lumka ukuthembela kuphela kumthombo omnye. Ngelishwa ukuba uGoogle akakwazi ukubonelela ngedatha yokwenyani kwii-Webmasters, ndiyakholelwa ukuba iyabanceda abantu bayeke ukugxila kumagama aphambili okhuphiswano kwaye bakhe izicwangciso zokuthengisa ezinomxholo ojikeleze kakuhle.
tags: zixhobo zewebhu zeGoogleI-google webmastersgwtumsila omdeamagama angundoqo we-longtail
UNikhil Raj uneminyaka engama-7 + yamava kwi-SEO nakwiNtengiso yeDijithali. Wayesebenza ngqo kunye Douglas Karr Ukulawula inani labathengi bengingqi kunye nelikazwelonke ngokusebenza kweinjini yokukhangela zasekhaya, ezelizwe kunye nakwamanye amazwe
UMegan C. Glover
NgoJanuwari 16, 2013 ngo-2:15 PM
Iposti emnandi, Doug! Ukuziphatha kwebali, ungathembeli kumthombo omnye wenyaniso ukuqokelela idatha yakho. Nokuba loo mthombo nguGoogle 🙂
NgoJanuwari 16, 2013 ngo-3:56 PM
Ngokuqinisekileyo, @twitter-16113225:disqus !